Mareykanka oo Haftar ugu baaqay in uu joojiyo dagaalada uu ka wado duleedka Tripoli. | Somali National Television - sntv.so
Home WARARKA CAALAMKA Mareykanka oo Haftar ugu baaqay in uu joojiyo dagaalada uu ka wado...
Mareykanka oo Haftar ugu baaqay in uu joojiyo dagaalada uu ka wado duleedka Tripoli.
Bishii Abriil ee sanadkaan Haftar iyo ciidamadiisu waxay bilaabeen duullaan si uu ula wareego caasimada Liibiya oo xarun u ah dowladda ay aqoonsan yihiin caalamka.
Previous articleMaamulka Degmada Jalalaqsi oo ku baaqay in gurmad deg deg ah lala soo gaaro.
Next articleWasaaradda Cadaaladda oo Muqdisho ka furtay siminaar ku saabsan habraaca sharci qorista.